Abdiwahab Ahmed 04/04/2014
Madaxweyne ku-xigeenka kooxda Real Madrid, Pedro Lopez Jimenez ayaa ka hadlay xayiraadda Barcelona laga saaray suuqa kala iibsiga ciyaartoyga, waxaanu sheegay in aanay kooxdiisu wax lug ah ku lahayn go’aanka FIFA ay xannibaadda ku saartay Barcelona labada-xili-suuq ee soo socda.
Madaxweynaha Kooxda Barcelona Josep Bartomeu ayaa mar uu khamiistii warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyey kooxo aanu magacaabin inay dabada riixeen go’aankaas, sababna ay u ahaayeen in Barcelona la gannaaxo, taas oo loo fasirtay inuu u jeedo kooxda Real Madrid.
Haddaba, madaxweyne xigeenka Real Madrid Jimenez ayaa sheegay in aanay kooxdiisu wax lug ah ku lahayn arrimahaas, waxaanu yidhi “Real Madrid iyo aniga midkaayana xubin kama aha FIFA, mana jirto meel aannu u marno xayiraadda lagu soo rogay Barcelona” ayuu yidhi Jimenez oo u warramay AS.
Jimenez waxa uu sheegay in uu bxubin ka yahay ururka naadiyada ee Yurub ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano ECA (European Club Association), kaas oo uu tilmaamay in Barcelona iyaduna ay xubin ka tahay, laakiin meel kale oo ay suurtogal tahay inuu galaangal u yeelan karo si loo ganaaxo kooxda ay iska soo horjeedaan aanay jirin. Laakiin waxa uu qiray in laba jeer oo uu ka qayb galay shir uu yeeshay ururkaas oo sii hoos taga FIFA, in aanay marnaba ka hadal xannibaad la saaro Barcelona.
“Waxaan caddaynayaa in guddida xaaladdaha ciyaartoygu, aanay lahayn awood ay xannibaad ku soo rogaan cid. Waxa uu u samaysan yahay kaliya in uu hubiyo macluumaadka iyo faylasha aanu helno, mana jirto meel u maro Xayiraadda Barcelona” ayuu yidhi Jimenez.
Lakers Highlights vs Chicago Bulls
Ancelotti:- 13-ka Gool Waxay Jawaab Ugu Filan Yihiin Guuldaradii Atletico Madrid
Hummels: Dortmund Way Diciiftay